China Varume's zipper hoodie track bhachi fekitori uye vagadziri | Dufiest
Yevanhu zipi hoodie track bhachi
CVC 60/40, T / C 60/40 nezv100% polyester
saizi: S, M, L, XK, XXL kana saizi yetsika
Tumira email kwatiri Dhawunirodha sePDP
Tracksuit chinyorwa chekupfeka chine zvikamu zviviri: bhurugwa uye a bhachi kazhinji nekamberi zipi. Pakutanga yaive yakatarwa kuti ishandiswe mumitambo, kunyanya kune vatambi kuti vapfeke zvipfeko zvemakwikwi (sekumhanya hembe neshort kana swimsuit) uye kusimuka pamberi pemakwikwi. inodziya mukati memazuva anotonhora echirimo / zhizha, evarume track bhachi ine zvishandiso zvinoverengeka (kunze kwekungova chinhu chikuru chemafashoni) icho chaungangodaro usina kumbofunga nezvacho. bhachi nebhurugwa rinobatanidza. Pakutanga, ivo vaive yakagadzirwa ne zvishandiso senge donje, terrycloth uye polyester kunyangwe zvemazuva ano maitiro anouya akasiyana emhando dzekugadzira uye tekinoroji senge nylon, Gore-Tex uye Sympatex inotaridzika kunge yakapfava uye inobvisa mwando.
Iyo track track zipper bhachi yakanyanyisa fashoni uye yakagadzikana kune ese ari maviri imba nekufamba uye inotengeswa nesu patenga rese.Tiri isu chete mugadziri uye mutengesi wemitambo kubva kuChina. Isu tinoshandisa jira rakasiyana senge donje, acylic, polyester uye Iyi vakadzi hoodie inowanikwa pamutengo wekutengesa. Vatengi vanogona kutenga hoodie yegorosa muhuwandu hwakawanda AT yemakwikwi mutengo AS AS DUFIEST mitambo inogadzira yakasarudzika kubva kuChina, wholesaler, ekisipota uye fekitori yemitambo, hoodies, track majaketi uye pasi, T-shati, Tangi yepamusoro uye akakwana mapfupi kupfeka.
Yevakadzi yekunze track track jaketi inopinza kwazvo mukati mevanhu vanofarira kukwira Nechinyakare kana dhizaini dhizaini pane ino yakasimba uye polar dehwe, ino ichave yako nyowani nyowani yekufarira.
Yepfuura: Yevanhu crewneck ine skrini yekudhinda
Zvadaro: Hoodies pullover nedip-dhayi uye anodhinda logo yevarume
Nyora yako meseji pano uye utitumire kwatiri
Ningbo Dufiest Maindasitiri. & Trade Co, Ltd.
Muvhuro kusvika Mugovera
For kubvunza pamusoro zvinhu zvedu kana kotesheni, ndapota siya email nesu uye isu tichava nekuonana mumaawa makumi maviri nemana.